But most of them are from former Bagan Forum and strange for me.
I've already posted some articles. Cool! Wanna more participate!
Native is cool!
butabit slow :D
patient to see forum
ဟုတ်ပါတယ် နေးတစ်မြန်မာက တော်တော်နှေးပါတယ်... အဟဲ အခုအချိန်ထိ နေးတစ်မြန်မာဟာ mmbiz.net က စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ htooeainthin.com မှာ ကပ်တင်ထားတာပါ... မန်ဘာတွေ ပိုက်ဆံစုပြီး နေရာအသစ်မှာ တင်ဖို့ လုပ်နေကြပါတယ်...
နှေးတယ်ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလည်း အကို။ နေတဗ်မြန်မာက ပလင်းနက်တို့ ပုဂံနတ်တို့ထက် အများကြီး မြန်တာကို။ မြန်မာပြည်ကနေ ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တော့ သဘောကျသွားပြီ။ စရေးနေပြီ။ ၀ါသနာတူတွေ တွေ့ရတာ ကောင်းတယ်။ ဟိုနေရာတွေကတော့ ကလေးတွေများတယ်ဗျ။ စိတ်ပိန်သွားပြီ။